Askartii ‘dili laheyd’ Erdogan oo la qabtay - BBC News Somali
Image caption Mid ka mid ah ragga la xiray ayaa lagu sheegay Kabtan Mustafa Serdar Ozay
Wararka ayaa sheegaya in ilaa iyo koob iyo toban xubnood oo baxsad ka ahaa kumaandoosta lagu qabtay afaafka hore ee magaalada loo tamashlaha tago ee Marmaris halkaasi oo uu Madaxweyne Erdogan uu fasax ku joogay.
Erdogan ayaa isaga baxay hoteelkii uu ku sugnaa xilligaasi kaddib markii uu helay xog hoose oo ku saabsan in ciidamo fallaagoobay ay ku soo wajahan yihiin hoteelka, halkaa oo markii dabme ay askartaasi galeen.
Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa aanay cidina wadin loo adeegsaday in lagu raadiyo ciidammadaasi baxsadka ah.
Arrintan ayaa timid kaddib markii dadka deegaanka oo ka ugaarsanayay keyn halkaa ku taal ay raggaasi ku arkeen oo ay soo sheegeen.
Intii uu socday howlgalka ayaa waxaa la iswaydaarsaday rasaas hasayeeshee lama soo sheegin wax khasaare ah.